डोमिंगो भिलार। अन्तिम डुat्गाको म्याड्रिडमा प्रस्तुतीकरण। उहाँको त्रयी | वर्तमान साहित्य
डोमिंगो भिलार। अन्तिम डुat्गाको म्याड्रिडमा प्रस्तुतीकरण। उहाँको त्रयी
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | मा अद्यावधिक गरियो 27/03/2019 16:34 | लेखकहरू, घटनाक्रमहरू, किताबहरु, कालो उपन्यास, धेरै
फोटोहरू (c) मारियोला डीसीए।
पछिल्लो सोमबार म थिए को प्रस्तुतीकरण अन्तिम जहाजलेखकको नयाँ उपन्यास डोमिंगो भिलार, Vigo मैड्रिड मा आधारित बाट। यो मा आयोजित थियो गलिसिया हाउस राजधानी को हृदय मा र त्यहाँ थिए पूर्ण पूर्ण.
सरल, नम्र र ओभरडोन यस पुस्तकको लागि १० वर्ष लामो प्रतिक्षा पछि महान स्वागतको कारण, भिलारले हामीलाई एक दिए आरामदायी कुराकानी र तपाईंको सबै दयालु। त्यसो भए यो त्यहाँ जान्छ लेख को बारेमा एक्टो र एक मा उत्तम अपराध उपन्यास त्रयी जुन मैले पढेको छु।
1 गलिसिया, डोमिंगो, लियो, रफा र म
2 म्याड्रिडमा अन्तिम डु boat्गाको प्रस्तुतीकरण - मार्च २ - - कासा डे गलिसिया
2.1 निर्माण प्रक्रिया
2.2 थिमहरू, पात्रहरू, लेखकको शौक
2.3 अन्तिम बिन्दु
3.1 पानी आँखा
3.2 डु the्गाको समुद्र तट
3.3 अन्तिम जहाज
गलिसिया, डोमिंगो, लियो, रफा र म
म छुट्टीमा छु बुउ, को दक्षिण तट मा पोन्तेवेद्र मुहाना, २० भन्दा बढी बर्षको लागि प्रत्येक जुन। Y Cangas बाट Vigo पार गर्नुहोस् को ब्रिज हेर्दै रान्डे छेउमा र टापुहरु Ces अर्को मेरो लागि एक हो सबैभन्दा ठूलो आनन्द पूरा वर्ष को।
वास्तवमा, गलिसियामा ती दिनहरू प्रायः वर्षको सर्वश्रेष्ठ हुन्छन्। मौसम को कारण, खाना, मानिसहरु र यसको उच्चारण मा संगीत र मेरो दृश्य को सुक्खा र समतल भूमिहरु भन्दा एकदम भिन्न छ। त्यसैले समय मा जे होस् मँ माचेगो चीज जन्मेको थिएँ, मलाई पनि अक्टोपस जस्तो लाग्छ फिरा गर्न.
त्यसकारण किन एक दिन मेरो मुटुको त्यो अंश उफ्रियो जब कुनै किताबको पसलमा र कुनै खास कुराको खोजी नगरीकन मैले हेरें। कालो र सेतो कभरको साथ पुस्तकको एक जोडी र आकर्षक शीर्षक। मैले एउटा उठाएँ र पछाडिको कभरमा मैले नामहरू पढें Vigo वा Panxón। मा पानी आँखा पीडित Bueu, र मा थियो डु the्गाको समुद्र तट Panxón मा घटना भयो, त्यसैले म तिनीहरूलाई लिन हिचकिचाएन.
त्यसपछि मैले पात्रहरू भेट्टाएँ: इन्स्पेक्टर लियो Caldas, आरक्षित, गम्भीर, केहि शब्दहरूको, शान्त, केही हदसम्म अटकाव गरिएको व्यक्तिगत जीवनको र आफ्नो बुबासँगको सम्बन्ध र आफ्नो आमाको प्रारम्भिक मृत्यु द्वारा चिह्नित। एक सहयोगी छ, राफेल एस्तेवेज, जारागोजाबाट, १ 193 c सेन्टीमिटर कडा र सीधा हात, गाह्रो प्रम्प्टको कि उसलाई एक भन्दा बढि समस्यामा पुर्‍याएको छ र उसलाई एक प्रकारको कमाएको छ। गालिसियामा निर्वासन थप गरिएको बोनसको साथ: प्रोभेरियल गलिसियाई अस्पष्टतासँग डिल गर्नु पर्छ जुन उसलाई सामान्यतया अनहिनगज गर्दछ।
उनीहरूले मलाई साह्रै चिन्थे म पागलपनमा लियो क्याल्डासको प्रेममा परें र म राफेल एस्तवेजको त्यो खैरो जनावरलाई सदाका लागि पूजा गर्ने छु, एक अनौंठो रूपमा प्रहरीको यस जोडी मा एक सही काउन्टरपोइन्ट। अब मैले तेस्रो खाइसकेको छु र, जे भए पनि, ती आकारको साथै पाठकहरूमा पनि वृद्धि भइरहेको छ।
प्रस्तुतिकरण अन्तिम जहाज म्याड्रिडमा - मार्च २ 25 - कासा डे गलिसिया
यो तेस्रो उपन्यासको प्रस्तुतिमा, डोमिन्गो भिलार पत्रकार सुसाना सान्टोलाल्लासँग कुराकानी गर्दै थिए लगभग एक घण्टा को लागी। धेरै उत्साहित र लजालु सुरुमा, भिलारले डबल भावना देखाए अविश्वास र अनिश्चितता धेरै को लागि स्वागत धेरै समय पछि पुस्तक को रूप मा किनभने त्यो नै समय यसको लागि निर्धारित थियो भुलक्कड। केहि यथार्थबाट अर्को छैन। यो एक थियो तत्काल सफलता सबै स्तरमा र बिक्री मा आलोचना मा।
भिलारले हामीलाई यसको बारेमा बताए किन यो लिइएको छ दस वर्ष यो तेस्रो पुस्तक जारी गर्न, जुन मूल शीर्षक थियो ढुone्गा पार। सडकमा एक व्यक्तिगत बम्प, यो उनको बुबाको मृत्यु, उहाँलाई के लेख्यो भनेर उनलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य गरायो। त्यसो भए फेरि सुरु गर्ने निर्णय गरे। किनकि हामी जसलाई लेख्ने राम्रोसँग थाहा छ, जब म्युजहरूले छुट्टी लिन्छ, आफैलाई रोक्दछ वा तपाईंलाई बेवास्ता गर्दछ, तपाईंले समय दिनुपर्नेछ। र प्रत्येक कथाको आफ्नै हुन्छ।
उनले सृष्टि प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरे, के गाह्रो र निराश त्यो कहिलेकाँही बाहिर जान सक्छ। र हामीलाई यो पनि थाहा छ। कार्यक्रमहरू, वातावरण र क्यारेक्टरहरू स्केच गर्न र आकार दिन यसले १० बर्ष लिन सक्दछ, तपाईं टेबलमा राख्नुहुन्छ एक भावना जुन तपाईं पनि व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ पाठक। र तपाइँ त्यो कथा गर्भनिहित रहन र लिन, वा सधैंको लागि विचार गर्न चाहानुहुन्छ, यसको नायक मित्रको रूपमा।
अनि त्यसपछि पाठकहरूले यसलाई गिल्काउन केवल केहि दिन लिन सक्दछन्। म यसले मलाई दुई हप्ता मात्र पायो, र किनभने म पढ्ने क्षणहरू स्पेस गर्दै छु जुन राम्रो र उत्कृष्ट संरचितको लागि चाहिएको हो त्यसैले तपाईले हो वा हो सुरू गर्नु अघि तपाई यो सुरू गर्नु भएको छ।
यो अघिल्लो दुईलाई भयो, त्यसोभए यो कसरी यस्तै हुन सक्दैन र? र बिर्सनुभयो? त्यो बिर्सनुहोस् वर्षा वर्षा Vigo, बादल र चिप्पी समुद्र को त्यो खैरो ईस्टर्न, ती सहरी र ग्रामीण बीचको भिन्नता? दयालुता, सरलता, करुणा र एकाकीपन बिर्सनुहोस् melancholic लिओ Caldas को? Lucidity र स्नेह को उसको बुबा? असहनीय लाई स्यान्टियागो लोसाडा? प्रभावकारी गर्न क्लारा बार्सिया? आयुक्तलाई Soto? त्यो बिर्सनुहोस् जंगली जनावरहरू रफा एस्तेवेज द्वारा, संसारका सबै कुकुरहरू कसलाई घृणा गर्छन् र कसलाई पूजा गर्न असम्भव छ?
होईन, ती सबै क्यारेक्टरहरू यति राम्रोसँग बुनेका र प्रदर्शन गरिएका अविस्मरणीय छन्। मनपर्‍यो इतिहासहरू र वर्णहरू माध्यमिक, र प्लटहरू यति राम्रो कल्पना गर्‍यो र बुनेको परिदृश्य नायकको रूपमा।
फोटोग्राफी: (c) ट्विटरमा Ediciones Siruela।
थिमहरू, पात्रहरू, लेखकको शौक
भिलारले स्वीकार गरे म अभिभूत थिए। तर यो के हुन्छ जब चीजहरू राम्रोसँग गरिन्छ जब उनीहरूले सिर्जना गर्नको लागि कति समय लिन्छन्। निस्सन्देह, हामीले उहाँलाई के सोध्यौं त्यो थियो अर्को १० बर्षको लागि प्रतीक्षा नगर्नुहोस् उपन्यास म पक्कै पनि पहिले नै अधिक चाहान्छु।
उनले यसमा टिप्पणी जारी राखे नयाँ प्लॉट, क्यारेक्टर र थिमहरू यो तेस्रो उपन्यास: धेरै र फरक अभिभावक-बच्चा सम्बन्ध, ला भीडभाड भएको शहरमा एकाकीपन जुन, तथापि, द्वारा खाली देखाउन सकिन्छ भावशून्यता घरबारविहीन र घरविहीन जस्ता अन्यतर्फ। वा, सबैभन्दा ग्रामीण वातावरणमा, अस्वीकृति र डर अनुमान गर्नेहरूलाई तर्फ फरक.
उनले ती कुराको पनि चर्चा गरे रुचि प्रत्येक लेखकको व्यक्तिगत जानकारी, जस्तै उहाँको तपाईले के लेख्नुहुन्छ ठूलो स्वरले पढ्नुहोस् बढी वा कम नजिक श्रोताहरू जसले उनीहरूको राय दिन्छन् वा गाईड दिन्छन् वा सुन्दछन्। र पत्रकारको प्रश्नको उत्तरमा, उनले टिप्पणी गरिन् कि उनी सक्नुहुन्छ दुबै ग्यालिश र स्पेनिशमा लेख्नुहोस्विशेष गरी संवादहरू। र कसरी त्यसपछि उसले अन्तिम पाठमा अनुवादलाई फिशिंग र फिटिंगमा जान्छ।
र पक्कै उसले त्यो बारेमा कुरा गर्यो हास्य जुन उनको उपन्यासहरूमा पनि छ। त्यो गैलिशियन retranca कि "तिनीहरूले हामी जन्म मा फ्याँक्छन्" र के हो त घरको ब्रान्ड। एक हास्य कि त्यसका लागि अधिक चम्किन्छ मास्टरफुल काउन्टरपोइन्ट सबैको बीचमा गैलिशियन पात्रहरू र जो एक छैन: रफा एस्टेभ।
थियो निष्कपट र उत्साहित धन्यवाद परिवार, साथीहरू, सम्पादकहरू र पाठकहरूलाई प्रतीक्षा गर्दै यस समयका लागि धैर्यताका साथ लेखिएको छ। एक धन्यवाद त्यो थियो आपसी सम्पादकहरू द्वारा र, अवश्य पनि, सबै सहभागीहरू द्वारा।
राम्रोसँग हस्ताक्षर कार्य समाप्त गरिसकेपछि, भिलार हामीसँग व्यर्थ दयाको साथ उपस्थित भए, र उनको "धन्यवाद" मेरो प्रशंसा गर्न, प्रशंसा र उनीहरूको कथाहरूको लागि धन्यवाद थियो अन्तिम टच ती साहित्यिक क्षणहरूको लागि जुन तपाईं पहिले नै बाँकीहरूको लागि ख्याल राख्नुहुन्छ।
जसले भिगोलाई यसको बासिन्दाहरू भन्दा टाढा जान्छ उसले यो देख्न सक्छ भिक्षु आवासीय टावर एक समुद्र तट को छेउमा अलग। त्यहाँ एक saxophonist, स्पष्ट आँखा साथ र कल छ लुइस रेइगोसा, देखा पर्दछ हत्या गरियो एक कुटिलता संग जुन जोश को एक अपराध लाई दर्शाउँछ। तर होइन अपराध दृश्यमा त्यहाँ केहि छैन, कुनै पदचिन्ह छैन, झगडाको कुनै संकेत छैन, न त कुनै श relationship्का गर्न कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध।
डु the्गाको समुद्र तट
यो दोस्रो उपन्यास मा पहिले नै अधिक विस्तृत हामीसँग फेला परेको छ एक मान्छेको लास Panxón को समुद्र तट मा। यो को हो जस्टो कास्टेलो, संयुक्त राष्ट्र नाविक हात बाँधेर देखा पर्दै। त्यहाँ कुनै साक्षी छैन र कुनै ट्रेस छैन मृतकको डु of्गाको। यो एक धेरै गाह्रो अनुसन्धान हुनेछ किनकि सबैजनाले आफ्ना श h्काहरू लुकाउँछन् वा तिनीहरूलाई धेरै जटिल मार्गहरूतिर मोड्छ।
यस कथाबाट धेरै राम्रो फिल्म अनुकूलन २०१ 2015 मा Caldas र Estévez को अनुहार राख्ने ती मध्ये कारमेलो गोमेज र एन्टोनियो ग्यारिडो.
एक जवान केटी को बेपत्ता, मोनिका एन्ड्राडमोआनाको छेउमा, टिरानमा बस्ने प्रख्यात सर्जनकी छोरी यसमा संलग्न छिन् रहस्य सुरुबाट। मैले काम गरें Vigo कला र शिल्प स्कूल, ऊसँग छोड्ने कुनै स्पष्ट कारण थिएन वा शत्रुहरू जो खतरामा थिए। वा हुनसक्छ।
La गहन छानबिन डे Caldas y Estévez ले यस्तो कदम चाल्दैछ जुन एक हजार सम्भाव्यतामा हराएको जस्तो देखिन्छ र शंकास्पदको रूपमा सबैको लागि लेबलहरू। थप रूपमा, व्यक्तिगत जीवन दुई प्रहरीको तिनीहरूमा धेरै परिवर्तनहरू हुनेछन् धेरै पाठकहरूले पक्कै पनि धन्यवाद दिएका छन्।
त्यो यदि तपाईंले अहिले सम्म पढ्नु भएको छैन भने, तपाईंले अब सुरू गर्नुपर्नेछ। उनको लागि साहित्यिक गुणस्तर र यसको फुर्सद पठन यो स्पष्ट रूपमा वाक्यको रूपमा विस्तृत छ। ती लागि पनि छोटो अध्याय र सँधै घरको एक ब्रान्ड द्वारा प्रस्तुत: शव्दको बिभिन्न अर्थ तिनीहरूमा के छ
तर सबै भन्दा माथि क्षमता को कारण de वातावरण नजिक जानको लागि निकट तर misty र एक जादूई स्पर्श संग जुन म सँधै स associate्गत गर्दछु गैलिसियन टेरा। र बारेमा पात्रहरू हो, तिनीहरू तपाइँसँग पहिलो पटक भेट्दा तपाइँको साथी हुन्छन्, ती मध्ये जुन तपाईं सँधै सोच्नुहुन्छ कि काश तिनीहरू वास्तविक थिए यसको प्रामाणिकताको लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » डोमिंगो भिलार। अन्तिम डुat्गाको म्याड्रिडमा प्रस्तुतीकरण। उहाँको त्रयी
जो नेस्बे। Years years बर्ष। उहाँ बारे पाठकहरु को लागी केहि शब्दहरु
रिकार्डो Alía, एक स्पेनिश अपराध उपन्यास को एक महान नाम संग साक्षात्कार।